Fahagagana izany - Neil L. Andersen
Nataon’ny Loholona Neil L. Andersen
Raha toa ka tsy misiônera manompo amin’ny fotoana feno ianao miaraka amin’ilay mari-pamantarana mipaingotra eo amin’ny palitaonao, fotoana hanoratanao anankiray ao amin’ny fonao izao—soratana, araka ny nolazain’i Paoly, “tsy tamin’ny ranomainty anefa, fa amin’ny Fanahin’Andriamanitra velona.”
Feno fahagagana ny fiainana an-tanin’i Jesoa Kristy: reny virijiny, kintana vaovao, anjely niseho tamin’ny mpiandry ondry, ny jamba nahiratra, ny nalemy afaka nandeha, anjely tao Getsemane sy tany amin’ilay fasana, ary ny fahagagana lehibe indrindra amin’ny rehetra—dia ny fitsanganany tamin’ny maty am-boninahitra.
Azonao alaina sary an-tsaina ve ny iraikambinifolo lahy teo an-tendrombohitra teo akaikin’i Galilia aho, rehefa nanatona azy ireo ny Tompo nitsangana tamin’ny maty ka niteny hoe: “Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ ny anaran’ ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina”?1 “Mandehana any amin’ izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ ny olombelona rehetra.”2
“Ny firenena rehetra”? “Amin’izao tontolo izao”? Amin’ny olombelona rehetra? Ho tanteraka ve izany? Na dia nankahery azy ireo aza i Jesoa, dia mety ho nanontany tena ihany izy ireo raha toa ka hisy fahagagana hiaraka amin’izy ireo eo am-panaparitahana ny filazantsara.3
Nandresy ny ahiahy ny finoana, ary nanandratra ny feony i Petera, nilaza hoe:
“Izay rehetra monina eto Jerosalema, … henoy ny teniko: …
“… Jesosy avy any Nazareta, … [izay] nohomboanareo sy novonoinareo tamin’ ny tanan’ ny olona tsy tan-dalàna: …
“Izany Jesosy izany … dia efa natsangan’Andriamanitra, ary vavolombelon’ izany izahay rehetra.”4
Tena feno fisehoan-javatra ara-panahy tsy azo lavina tamin’izany andro izany, ary fanahy 3.000 no vita batisa. Nanaraka ny finoan’ireo mpino ireo mari-pamantarana sy fahagagana, araka ny nampanantenain’i Jesoa.
Raha naverina tamin’ny laoniny teto an-tany ny Fiangonan’i Jesoa Kristy 183 taona izay, dia nanakoako tamin’ny asa nomen’ny Tompo ny vondrona mpianatra keliny ireo teny nolazainy an-jato taonany lasa: “Ary hiantefa amin’ ny olon-drehetra.”5 “Satria marina tokoa fa tsy maintsy miala avy eo amin’ ity toerana ity ny feo ka mankany amin’ izao tontolo izao ary hatrany amin’ ny faran’ ny